Vahaolana Ara-dalàna Ho An’ny Fitsaràm-bahoaka Any Nizeria? · Global Voices teny Malagasy
Vahaolana Ara-dalàna Ho An'ny Fitsaràm-bahoaka Any Nizeria?	Voadika ny 13 Novambra 2012 2:42 GMT
Zarao: Mpianatry ny Anjerimanontolon'i Port Harcourt efatra novonoina, avy amin'ny babajidesalu.wordpress.com
Tamin'ny 5 Oktobra 2012, mpianatra efatra avy tao amin'ny Anjerimanontolon'i Port Harcourt any Nizeria no nodarohana ary nodoran'ny fokonolona mpanao fitsaram-bahoaka, noho izy ireo voalaza fa nangalatra finday Blackberry sy solosaina filanja. Ny fahafatesana mampahonena nanjo an'i Mike Lloyd Toku, Chiadika Lordson, Ugonna Kelechi Obusor ary Tekena Elkanah – fantatra amin'ny solon'anarana hoe Aluu4 – dia niteraka hatezerana sy adihevitra tamin'ny aterineto momba ny olana goavan'ny fitsaram-bahoaka any Nizeria. Io dia nanokatra ihany koa làlana ho an'ireo olom-pirenena mba hanairana ny sain'ny olona sy handrosoana vahaolana.
Raha nanamarika ny tsy fisian'ny fepetra ara-dalàna manohitra ny fitsaràm-bahoaka, namoaka fanangonan-tsonia ilay mpitorala blaogy Okechukwu Ofili tamin'ny 18 Oktobra ho an'ny lalàna mandràra ny fitsaràm-bahoaka izay nosoniavin'izy tenany sy ireo “Nizeriana mitolona ho an'ny FIOVANA” (vakio ato ny antsipirihan'ilay volavolan-dalàna ) ka hatreto dia nahangona sonia maherin'ny 3500.
Manazava i Ofili:
Nihalasa fahazarana andavanandro ity trangana Fitsaràm-bahoaka ity aty Nizeria. Satria ny olona/fiaraha-monina mandika ny lalàna dia mamaha ireo olana amin'ny heriny manokana. Ankehitriny fantatsika fa tsy misy salanisa na antontanisa azo antoka momba ny Fitsaràm-bahoaka aty Nizeria, fa ny fantatsika dia efa an-taonany maro izany no nisy. Ary an-taonany maro isika no nitaraina, nitomany sy nanatrika, nefa tsy nisy fiovàna satria mbola misy hatrany ny fitsaràm-bahoaka ary tsy voasazy ireo mpanatanteraka izany.
Izany dia satria tsy matoky ireo mpitandro filaminana sy ny rafi-pitsaràna izay nosimbàn'ny kolikoly, tsy fahampiana traikefa ary fitaovana tsy izy intsony ny vahoaka. Nefa koa manampy trotraka ny haratsian'ny olana dia noho ny tsy fisiana na tsy fahampiana fanekena ny Fitsaràm-bahoaka (sy ireo endriny maro hafa) ho heloka ao anatin'ny Lalàna Federalintsika, indrindra ny LALANA MAMARITRA NY HELOKA BEVAVA, CAP C38 LFN 2004. Lalàna miaraka amin'ny pejy matevina miisa 145 mitanisa ireo heloka rehetra nefa tsy milaza ny momba ny fitsaràm-bahoaka… milaza ny fanaovana sorona, fanakorontanana ary ny fanaovana hajia sandoka aza, nefa tsy misy momba ny fitsaràm-bahoaka.
Loholona roa no nahazo dika tamin'io lalàna io mba hodinihina.
Raha lany ho lalàna izany dia hisy ny fampidirana am-ponja sy sazy ara-bola ho an'ireo mpanatanteraka fitsaràm-bahoaka sy ireo fiaraha-monina nitrangan'ny herisetra. Ho lasa heloka ho an'ny olom-pirenena na mpitandro filaminana ihany koa ny fijoroana akaiky sy fanatrehana izany nefa tsy niezaka nanaparitaka ny vahoaka akory.
Mba ho isan'ny fanentanana fitakiana fahamarinana ho an'ny Aluu4, nisy vondrona mpitoraka blaogy nanampy nikarakara ny Tweet-a-thon tamin'ny 25 Oktobra tamin'ny fampiasàna ny tenifototra #NeveragainNG sy #Aluu4, mba hiezahana hampalaza izany lohahevitra izany tao amin'ny Twitter any Nizeria.
Tanatina fanadihadiana tamin'ny mailaka, Kathleen Ndongmo, teratany Kamerone mipetraka any Lagos, Nizeria izay navitrika tamin'ny fanentanana, dia manoritsoritra ny hanantenan-dry zareo hisarihana hetsika bebe kokoa manohitra ny fitsaram-bahoaka:
1. Natao ho fanairana io fanangonan-tsonia io. Hanan-tantara izany raha afaka manova ny lalàna efa misy ankehitriny momba ny heloka bevava ny vahoaka. Hanome fahatokisan-tena betsaka ho an'ireo mafana fo izany, sy ireo vondrona niady an-taonany maro ho an'ny fanovàna ny fitsaràna, ny manampahefàna ary ny lalàna momba io olana io.
2. Avy eo tokony hisy fahatsiarovan-tena, fanabeazana, satria misy tsy fahampiam-pahalalàna any ho any, izay tokony hovahantsika.
3. Farany nefa tsy atao latsa-danja, hisy asa fiarovana atao mba hametrahana ny fanovàna ara-pitsaràna sy amin'ny manampahefàn'ny polisy.
Ity hetsika ankapobeny ity dia hanampy antsika hahatratra ny tanjona ho an'ny hetsika fototra maharitra mba hitarihana dinika ho an'ny fanovàna.
Ny vohikala Nizeriana Premium Times dia nitatitra tamin'ny 18 Oktobra fa olona 13 nahiahiana no nomelohana noho ny tsikombakomba sy famonoan'olona tao amin'ny Fitsaràn'ny Port Harcourt.
Ity lahatsoratra ity sy ny dikanteny amin'ny Espaniola, Arabo ary Frantsay dia tohanan'ny International Security Network (ISN) ao anatin'ny fiaraha-miasa hikatsahana ny feon'ny olon-tsotra momba ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fiarovana manerantany.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraJulie Owono